ỤMAHỊ, HAPỤ ỊRỤ OGIGE EHI KWALITE ỌNỌDỤ AHỤIKE NA AGỤMAKWỤKWỌ N'EBONYỊ - ỌGANIHU EBỌNYỊ - hoo!haa!!
NWANYỊ DỊ IME ASỤGBUOLA DỊ YA MAKA ISU ANỤ ỌKỤKỌ Ọ NA-ERE ỌKỤ
AKA AKPARALA MMADỤ ISE NDỊ RERE MKPỤRỤ OBI MMADỤ MAKA ỌGWỤ EGO
MMỌNWỤ IKENGA BỊARA BE ỌGADAGIDI ỤBỌCHỊ ISTA MỌNDE
MMEMME NCHETA ỌMỤMỤ ỌKAMMỤTA ỌGỌỌ IFEKA
ỤZỌDỊMMA NA-EMEBIRI NDIGBO IHE – NTOROBỊA ỌHANAEZE
BỊAFRA NA AMBAZỌNỊA GA – AGWA NDỊ NTA AKỤKỌ MBAỤWA OKWU – IPOB
LEE EKPERIME NA-EBEJI OKPORO ÍGWÈ OLOKO N’ENUGWU
NDỊ DIBỊA OYIBO ENUGWU STEETI ESONYELA NDỊ ÓTÙ HA N’ỊGBA ABỤBỌ ỌRỤ
NWOKE AGBAGBUOLA ONYENWEỤLỌ KA O JIDERE YA N’ELU NWUNYE ỌHỤRỤ YA
Home/AKỤKỌ ỤWA/ỤMAHỊ, HAPỤ ỊRỤ OGIGE EHI KWALITE ỌNỌDỤ AHỤIKE NA AGỤMAKWỤKWỌ N’EBONYỊ – ỌGANIHU EBỌNYỊ
ỤMAHỊ, HAPỤ ỊRỤ OGIGE EHI KWALITE ỌNỌDỤ AHỤIKE NA AGỤMAKWỤKWỌ N’EBONYỊ – ỌGANIHU EBỌNYỊ
hoohaaco October 20, 2020
Abakiliki: Ótù Ọganihu Ebọnyị akpọkuola Gọvanọ Devidi Ụmahị nke Steeti ahụ ka ọ chefuo maka iji ego Gọọmenti rụọ ogige ehi iri n’atọ n’Okpuru Ọchịchị nile dị na Steeti ahụ kama ya jiri ego ahụ kwalite ọnọdụ ahụike na agụmakwụkwọ na Steeti ahụ.
N’ozi ya ụnyahụ, Onyeisi Ótù ahụ, Dọkịnta Laz Ude Eze kwuru sị:
“Ótù Ọganihu Ebọnyị, ótù ụmụ afọ Ebọnyị bu ndozi Obodo, mmepe na oganihu Ebọnyị Steeti n’obi na ekele Gọvanọ Ebọnyị Steeti, Omenka Devidi Ụmahị maka nnukwu ọrụ ọ na-arụ na Steeti ahụ dịka okporo ụzọ awara awara ọhụrụ, ógwè ọgba n’elu (flyover), wdg.
“Kaosiladi, Ọganihu Ebọnyị chọrọ ka Gọvanọ Ụmahị jiri ego ọ chọrọ iji rụọ ogige ehi (cattle ranch) n’Okpuru Ọchịchị iri n’atọ dị na Steeti ahụ kama ya were ego ahụ kwalite ọnọdụ ahụike na agụmakwụkwọ n’Ebọnyị Steeti.
“Ihe karịrị ọkara ụlọ akwụkwọ Praịmarị na sekọndịrị na Steeti ahụ enweghị Ọba Akwụkwọ, ngwa ọ́mụ̀mụ̀ nkanụzụ na kọmputa; ụlọ ọgwụ na ogige ahụike anaghị arụ ọrụ etu kwesịrị ekwesị.
Dọkịnta Ude Eze kwukwara na Gọọmenti Steeti ahụ enweghị ndị dọkịnta karịrị mmadụ iri n’ise na sọọsọ ndị Ọ́kụ́ ọgwụ (pharmacists) abụọ ha were n’ọrụ.
O kwukwara na ọtụtụ ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ enweghị ụlọ mposi chaa chaa.
“Gọọmenti Ebonyi agbawo mbọ ịrụpụta ihe ndị a na-ahụ anya dịka okporo ụzọ nakwa ógwè ọgba n’elu. Ihe fọdụrụ bụ ịkwalitezi ọnọdụ ahụike na agụmakwụkwọ n’Ebọnyị iji mee ka okporo ụzọ na ihe ndị ahụ ọ rụrụ baara ndị Ebọnyị uru”
NTIWA ỤLỌ NGA BINI:AGHỤGHỌ DỊ YA
NDỊ NGAGHARỊ IWE #ENDSARS KPỌCHIRI ỤZỌ OTIGBA,ENUGWU NỌRỌ N'ỤZỌ AGBA BỌỌLỤ RUO ISI ỤTỤTỤ TAA
AKỤKỌ ỤWA (262)
NKE NA-EME UGBUA (30)